समाचार - बाह्य इन्सुलामा एल्युमिनियम फोइल कपडा प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा कुन कुरामा ध्यान दिइनेछ
एल्युमिनियम पन्नी आगो प्रतिरोधी फाइबर पनि सिरेमिक फाइबर र एल्युमिनियम सिलिकेट फाइबर भन्न सकिन्छ। सिरेमिक फाइबर व्यापक अर्थमा अग्नि-प्रतिरोधक फाइबरको मुख्य प्रतिनिधि हो, जुन एल्युमिना, सिलिका, एल्युमिनियम सिलिकेट र जिरकोनिया आगो प्रतिरोधी फाइबरको सामान्य नाम हो। यसैबीच, आगो-प्रतिरोधी फाइबरले कार्बन फाइबर, नाइट्राइड फाइबर, बोरइड फाइबर र गैर आक्साइड फाइबर पनि सामिल गर्दछ। संकीर्ण अर्थमा, केवल अल्युमिनियम सिलिकेट पग्लियो वा ऑक्सीकरण गरिएको छ, सोल फाइब्रोसिस भएको फाइबरलाई मात्र सिरेमिक फाइबर बनाउन सकिन्छ।
बाह्य इन्सुलेशन लेयरको प्रक्रियामा एल्युमिनियम फोइल कपडाको ध्यान:
१. बाहिरी इन्सुलेशन तहको मोटाई: ऊर्जा बचत डिजाइन मानकमा तातो स्थानान्तरण गुणांकको सीमित मूल्य मापदण्डको न्यूनतम आवश्यकता हो, र स्थानीय तातो पुलबाट अलग रहनु पर्छ। जब स्टीलको तार जाल मिश्रित सामग्रीले बनेको बाहिरी इन्सुलेशन प्रणाली उत्पादन प्रयोग गरिन्छ, इन्सुलेशन तहको आवश्यक मोटाई वास्तविक मापन परिणामहरूको आधारमा निर्धारण गरिन्छ। पर्खालको तातो स्थानान्तरण र तातो खपत कम गर्न, यो इन्सुलेशन तहको मोटाई बढाउन मात्र होईन। बेलायतले इन्सुलेशन, इन्सुलेशन र समग्र पर्खालको हवा कडाईको सम्बन्ध राख्दछ।
२. बाह्य इन्सुलेशन प्रदर्शन: इन्सुलेशनले निश्चित इन्सुलेशन प्रभाव देखाए पनि यो तापीय इन्सुलेशन बराबर हुँदैन, विशेष गरी तातो गर्मी र चिसो जाडो क्षेत्रमा। मौसम तापक्रमको चलन बाहेक, थर्मल इन्सुलेशन प्रदर्शनलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ र उपायहरू अझ सुदृढ पार्नु पर्छ।
Each. प्रत्येक इन्सुलेशन प्रणालीमा एक प्रणाली उत्पादन हुन्छ, र प्रत्येक घटक सामग्रीको प्राविधिक प्रदर्शन प्रासंगिक मापदण्ड पूरा गर्नै पर्छ। बाह्य इन्सुलेशन भित्ता फार्ममा पर्खालमा स्थापना भएको हुनुपर्दछ। तसर्थ, प्रणाली प्रदर्शन पूर्ण रूपमा विचार गर्नुपर्छ, किनकि यसले विभिन्न प्रतिकूल बाहिरी कारकहरू बोक्दछ र थर्मल इन्सुलेशनको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
बाहिरी इन्सुलेशन लेयर प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा एल्युमिनियम फोइल कपडाको सतर्कता माथि छ। सामान्यतया, प्रत्येक सँग यसको आफ्नै फाइदाहरू हुन्छन्। हामी तिनीहरूको आफ्नै अवस्था अनुसार काम गर्न सक्छौं। मलाई आशा छ कि यस लेखले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
पोष्ट समय: मे १ 13-२०१२